बामगठबन्धनले नै सम्बोधन गर्छ मधेशका सबै एजेन्डा : पशुपतिदयाल मिश्र उम्मेदवार, बाँके निर्वाचन क्षेत्रनं.२ – Sadarline
पशुपतिदयाल मिश्र बाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार, बाँके निर्वाचन क्षेत्रनं.२
आगामी मंसिर २१ गते हनुे आम निर्वाचनमा बाँके निर्वाचन क्षेत्रनं.२ बाट प्रतिनिधि सभाका लागि बाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार भएका पशुपतिदयाल मिश्र यतिबेला मतदाताको घरदैलोमा व्यस्त छन् । उनले आफुलाई मतदान गर्नको लागि घरदैलोमा पुग्दा आफुले गरेका विभिन्न सामाजिक कार्यका साथै आफ्ना एजेण्डा स्पष्ट राख्दै आएका छन् । नेपालगन्ज विश्वविद्यालय स्थापना गराउन निरन्तर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका उनी नेपालगन्ज विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन लागि परेका मिश्र २०५४ सालका साविक हिरमिनिया गाविसका अध्यक्ष हुँदै गाविस महासंघका अध्यक्ष र जिविस बाँकेका सभापति समेत भइसकेका छन् । मधेसीको एजेण्डालाई स्थापित गर्न मिश्रले बाँकेबाट नेतृत्वदायी भूमिका निभाए । मधेसीको एजेण्डा सबैको साझा भइसकेको बताउने मिश्र बाँके क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार बनेका छन् । अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका मिश्रसँग उनको उम्मेदवारीको सेरोफेरोमा रहेर गरिएको कुराकानी ।
– चुनावी अभियान कसरी अघि बढेको छ ?
– चुनाव प्रचारप्रसारमा सबै तहका कमिटीहरु परिचालित भएका छन् । भेटघाट र घरदैलो अगाडि बढिरहेको छ । वाम गठबन्धनप्रति जनताको उत्साह छ । विकास, स्थायित्व र परिवर्तनका लागि जनता उत्साहित छन् । चुनावी अभियानमा जनताको सहभागिता बढिरहेको छ । चुनावी सभा र घरदैलोमा जाँदा मतदाताले न्यानो स्वागत गरि रहेका छन् । पहिलो चरणको घरदैलो सकेर यतिबेला विभिन्न भेला सभालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो संरक्षण र तथस्ठ रहेका मत आफुतिर आर्कशित गर्नको लागि प्रयासहरु भई रहेको छ ।
२. चुनावी अभियानमा निस्किँदा आम मतदाताको प्रतिक्रिया कस्तो आएको छ ?
– जनता छ–छ महिनाको म्यादी सरकारका कारण विकास भएन भनेर उनीहरुमा अति नै नैरास्यता छाएको छ । स्थायी सरकार, विकास र संवृद्धिका लागि जनता लालायित छन् । नेपालगन्जको विकासका लागि धेरै पहिलेदेखिको सपना पुरा गर्न वाम गठबन्धन प्रतिको झुकाव देखिएको छ । भौगोलिक हिसाबले धेरै सम्भावना बोकेको भए पनि बाँकेमा सरकारी नजर पर्न सकेन । पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बाटोघाटो, विद्युत, सुकुम्वासी, बाढीपीडितको समस्या, कृषिजन्य उद्योग फस्टाउन सकेन । यहाँ चिनी कारखाना, उद्योगधन्दाहरुको टड्कारो आवश्यकता छ । हामीहरु चुनावी अभियानमा जाँदा जनताले यी सबै समस्याको समाधान खोजेका छन् । मैले विगतदेखि नै यी सबैखाले समस्याहरुको उठान गर्दै आएकाले जनताले म प्रति धेरै आशा गरेका छन् । मैले पनि ती समस्या समाधानका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छु ।
–तपाई के–कस्ता एजेण्डाहरुका लिएर चुनावी जानुभएको छ ?
– नेपालगन्जलाई प्रदेश नं. ५ को राजधानी बनाउने पहल र प्रयासका साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि पहल हुनेछ । ढल निकास, बाढी तथा डुवानको समस्या समाधान गर्ने, राप्ती नदीमा स्थायी तटबन्धको व्यवस्था गर्ने, नेपालगन्ज विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभागृह निर्माण गर्ने, सबै सडकहरुको स्तरोन्नती गरी कालोपत्रे गर्ने, नेपालगन्जलाई औद्योगिक केन्द्र बनाउने, नेपालगन्जमा विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने, भेरी अञ्चल अस्पताललाई स्तरोन्नती गरी सरकार मेडिकल कलेज बनाउने, सुख्खा बन्दरगाह, चक्रपथ निर्माण लगायतका हाम्रा एजेण्डाहरु छन् । हाम्रा एजेण्डा र प्रतिवद्धतामा जनताको भरोसा छ, त्यसकारण पनि हामीले जनताको साथ पाइरहेका छौं । हामीले वृद्धवृद्धाको सम्मान गर्दै वृद्धभत्तालाई ५ हजार पु¥याउने प्रतिवद्धता जनाएका छौँ । स्थानीय स्तरमा कृषिको आधुनिकीकरणसँगै कृषिजन्य उद्योगहरुको स्थापना गरी पीपीपी मोडललाई प्रभावकारी बनाउने हाम्रो प्रतिवद्धता हो । हामीले चुनाव जितेर यी सबै प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्छौ ।
–तपाईलाई किन जिताउने ?
– वाम गठबन्धनलाई स्थायी सरकार, विकास र समृृद्धिका लागि भोट दिने हो । मुलुकको समस्या समाधानका लागि वाम गठबन्धनको विकल्प छैन । संविधान कार्यान्वयन, ऐन, कानूनहरुको निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्नुछ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रका समस्याहरुको समाधान, पछाडि पारिएका वर्ग समुदायको उत्थान गर्न आवश्यक छ । पाँच वर्षभित्र जिल्लाको विकासमा आमूल परिवर्तन गर्ने मेरो अर्जुन दृष्टि छ । जिल्लाको साना ठूला समस्या/ योजना बारेमा मैले प्रष्ट बुझेको छु । गर्नसक्ने ठाउँमा पुग्ने वित्तिकै मैले तत्काल र दिर्घकालिन समस्या÷योजनाहरु समाधान गरिहाल्छु । तपाईले मलाई जिताउनुस्, म तपाईलाई निराश बनाउने छैन ।
–मधेसका मुद्दाहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
– मधेसको आन्दोलन आवश्यकता थियो, हामीले त्यसबेला त्यो मुद्दालाई उठायौं । अहिले मधेसको मुद्दा देशको मुद्दा बनेको छ । सबै पार्टीको केन्द्रविन्दु बनेको छ । मधेस आन्दोलन अब देशको आन्दोलन भएको छ । हिजो मधेसी दलको मात्रै माग थियो, अब यो साझा एजेण्डा बनिसक्यो । अहिले मलाई विभिन्न खाले आरोप लागिरहेका छन्, ती आरोप लगाउनेहरुले सामाजिक सद्भाव विथोल्न खोजिरहेका छन् । विगतमा मधेस आन्दोलनलाई विथोल्न खोज्नेहरु अहिले आफूलाई सच्चा मधेसीको नारा दिइरहेका छन् । मधेसीको एजेण्डा स्थापित गर्नु थियो, त्यो पुरा भयो । अब सम्बोधन गर्न सबै राजनीतिक दलहरुको आवश्यकता छ । तराई मधेसका जनतालाई शोषण, उत्पीडन, विभेद र असमानताबाट मुक्त गरेर न्याय, समानता, समृद्धि सुनिश्चित गर्न देश र जनताको आवश्यकता अनुसार संविधान कार्यान्वयनको क्रममा परिमार्जन र विकास गर्दै तराई मधेसका साथै समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नुका लागि मेरो प्रयास र पहल सदैव रहनेछ ।
– अन्तमा केही भन्नुहुन्छ ?
– वाम गठबन्धनलाई जिताउनुस्, धेरै वर्षदेखिको नेपालगन्जको विकास गर्ने मेरो सपना पुरा गरि
दिनुस् । मैले नेपालगन्ज समग्र बाँकेलाई प्रदेश नं. ५,६ र ७ को प्रवेशद्वारको रुपमा विकास गर्दै पाँच वर्षभित्र नेपालगन्जलाई मैले आधुनिक शहरका रुपमा विकास गर्छु ।
सदरलाइनडटकम १७ मंसिर, नेपालगन्ज : निर्वाचनको प्रचार अवधी सकिन केही घण्टामात्र बाँकी रहँदा विवेकशिल साझा पार्टीले आफ्ना चुनावी एजेण्डा सहित घरदैलोलाई जारी रहेको छ । मतदाताको घरदैलोमा पुगेका विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेदवारले आफुहरुले भेटेका सबै मतदाताले परिवर्तन चाहेको र उनीहरुको सङ्ख्या बढ्दै गएको बताएका छन् । राजनीतिक परिवर्तन भए पनि […]